အလှဆိုတာ….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အလှဆိုတာ…..
Posted by hmee on May 12, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 15 comments
“အလှဆိုတာ ကြည့်တဲ့သူရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာရှိတယ်” တဲ့ ဖတ်ဖူးတဲ့ စကားပုံလေး။ မိမိမျက်လုံးထဲမှာ လှပါတယ်လို့ မှတ်ယူထားပေမဲ့ တခြားသူ မျက်လုံးထဲမှာ လှချင်မှလှမှာ။ ဒါကြောင့် အလှဆိုတာ ခံစားသူရဲ့ စိတ်နဲ့သာ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တယ်လို့ ကျွန်မကတော့ မှတ်ယူထားပါတယ်။
တခါက စာအုပ်တအုပ်ထဲမှာ ပုံပြင်လေးတပုဒ် ကျွန်မ ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပုံပြင်လေးကတော့ — ဘုရင်ကြီးတပါးဟာ တိုင်သူပြည်သားတွေရဲ့ အခြေအနေကို သိချင်တာနဲ့ တိုင်းခန်းလှည့်လည် လာပါတယ်။ နောက်လိုက် နောက်ပါ အစုံအလင်နဲ့ပေါ့။ တနေရာ ရောက်တော့ အမျိုးသမီး တယောက်ဟာ အင်မတန် အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်တဲ့ ကလေးလေးကို ပွေ့ဖက်ပြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အပြည့်နဲ့ နမ်းနေတာ တွေ့ရတယ်။ ကလေးက ဘယ်လောက် အရုပ်ဆိုးသလဲဆို မျောက်ကလေးနဲ့ တူနေပါတယ်။ အဲဒါကို ဘုရင်ကြီးကမြင်တော့ အနားမှာရှိတဲ့ ပညာရှိအမတ်ကို မေးပါတယ်။ ဒီလောက်အရုပ်ဆိုးတဲ့ကလေး တခါမှကို မမြင်ဘူးဖူး။ ဒါကိုတောင် ဒီအမျိုးသမီး ချစ်နေလိုက်တာ မြင်ရရုံနဲသိသာတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲပေါ့။ ဒါနဲ့ အမတ်ကြီးက ပြန်လည်လျှောက်တင်ပါတယ်။ အရှင်မင်းကြီး ဒီနှစ်ယောက်ဟာ သားအမိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မိဘများဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို လောကမှာ အလှဆုံးလို့သာ ထင်ကြောင်းပါ ဘုရားပေါ့။ အမတ်ကြီးရဲ့ အဖြေကို ဘုရင်ကြီးက မကျေနပ်ပေမဲ့ ဘာမှတော့ ပြန်မပြောဘူး။ နန်းတော်ပြန်ရောက်တော့ စိတ်ထဲမှာ ခုလုခုလု ဖြစ်နေတဲ့ ဒီအကြောင်းကို မှန်မမှန် စမ်းသပ်ချင်လာတယ်။ ဒါနဲ့ နန်းတော် အစောင့်ကိုခေါ် လောကမှာ အလှဆုံးသူကို ရှာခဲ့ဖို့ ခိုင်းသတဲ့။ အချိန်ကတော့ သုံးရက်ပေးလိုက်တယ်။ အစောင့်လည်း အဖြေပေးရမဲ့ရက် နီးလာတဲ့အထိ ရှာမရလို့စိတ်ဆင်းရဲပြီး တမှိုင်မှိုင်တတွေတွေ ဖြစ်နေတာကို မိန်းမက မြင်ရတာနဲ့ မေးမြန်းတော့ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် သိရပြီ။ “အမလေး…. ယောက်ကျားရယ် ဒါများခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်လို့ ကျုပ်တို့ သမီးလေး ခေါ်သွားပြီးပြလိုက်” လို့ အကြံပေးသတဲ့။ နောက်ဆုံး သတ်မှတ်ရက်လည်း ရောက်ရော သမီးလေးကို နန်တော်ကိုခေါ်သွား “လောကမှာ အလှဆုံးသူဟာ ဟောဒီက ဘုရား ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ သမီးလေးပါ ဘုရား”လို့ လျှောက်တင်လိုက်သတဲ့။ အဲဒီတော့မှ ဘုရင်ကြီးလည်း အမတ်ကြီး အဖြေဟာ တယ်မှန်ပါလား ဆိုပြီး ဘ၀င်ကျသွားပါတယ်တဲ့။ ကျွန်မလည်း အဲဒီ ပုံပြင်လေး ဖတ်ပြီး “ အမလေး မှန်လိုက်တဲ့ ပုံပြင်လေး” လို့ မှတ်ချက်ချမိပါတယ်။
တရက်မှာတော့ ကျွန်မယောက်ခမနဲ့ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုက ဘယ်လို ဆက်စပ်ပြီး ရောက်သွားတယ်မသိဘူး အဲဒီ့ ပုံပြင်အကြောင်း ရောက်သွားပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ပုံပြင်အကြောင်း အစအဆုံး ပြောပြပြီး “ မေမေရယ် မှန်လိုက်တဲ့ ပုံပြင်လေး ၊ သမီးလည်း တကယ်ပဲ အဲ့ဒီလို ဖြစ်နေတာ၊ တခြားကလေးလေး တွေ့ရင် ဒီကလေးက ငါ့သားလောက် အသားမဖြူဖူး၊ ငါ့သားလောက် ချစ်စရာမကောင်းဘူးပေါ့။ တခါတရံ ကိုယ့်သား ပိန်တာကို အပြစ်မမြင်ပဲ ၀တဲ့ ကလေးများတွေ့ရင် ကလေးကလည်း ၀လိုက်တာ ငါ့သားလို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် မရှိဘူး။ အဲ့ဒီလို ကိုယ့်သားဘက်ပဲ အလေးသာပြီး အမြဲတွေးဖြစ်နေတာ မေမေရဲ့ ကိုယ့်သားထက် လှတဲ့ ကလေး မရှိဘူတောင် ထင်နေတာ ” လို့ ပြောပြတော့ ကျွန်မယောက်ခမ ခမျှာ ရယ်လိုက်တာ မျက်ရည်တောင်ကျရှာတယ်။
သီချင်းတပုဒ် ရှိပါတယ် ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ “ အမေကပြောတော့ သားချောပါ မင်းတို့ မျက်စေ့မှုန်လို့ပါ” တဲ့။ ဘယ်လောက်ရုပ်ဆိုးတဲ့သူ ဖြစ်ပါစေ မိခင်ရဲ့ မျက်စေ့ထဲမှာတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အရင်းခံကြောင့် လောကမှာ အလှဆုံးသူသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြစ်ဖူးတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ကလေးမရှိပဲ အမတစ်ယောက်က ပထမဦးဆုံးမွေးတဲ့ တူမလေးကို ကြည့်ပြီး မကြာခဏ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ ပြောမိတယ်။ အခြားလူတွေရှေ့မှာလည်း သတိမထားမိပဲ ပြောတတ်လို့ အမေက နင်က နင့်တူမမို့ ချစ်နေတာ။ သူများက ချစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ချစ်ရင်လည်း တိတ်တိတ်နေပြီးချစ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒါကို လက်မခံပဲ ကိုယ့်တူမမို့ ချစ်တာလား။ ကလေးကပဲ တကယ်ချစ်စရာကောင်းတာလားလို့ စဉ်းစားလိုက်ရတာ။ အခု တူမလေးကြီးလာမှ မိသားစုတွေစုံရင် ပြန်ပြန်ပြောပြီး ရီကြရတယ်။
အိမ်မှာ မကြာခဏ အဖွါးကို ချောတယ် ချောတယ် ၊ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာနဲ့ … အမှန်တော့ ချစ်လို့ကို ဘာလုပ်လုပ် ဘာပြောပြော အကောင်းကို မြင်နေတာ …
မိဘက သားသမီးအပေါ်မှာ ထားတဲ့မေတ္တာ လောက် ကြီးမြတ်တာ လောကမှာမရှိနိုင်ပါဘူး။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ ခုထိ မိဘကို ကျေးဇူးဆပ်သလို လုပ်ကျွေးနေရတာ ကျေနပ်တယ်။
သားသမီးကျတော့လဲ လောကမှာ တန်ဘိုးအရှိဆုံးလို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။
ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်းဆိုတာ မိဘမေတ္တာကို ပျက်ရယ်ပြုစော်ကားတဲ့ စကားပုံပါလားဆိုတာ နောက်ကျမှသိရတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် (ဒီစကားပုံဆိုတာ ဆင်ခြေပေးအတ္တကြီးသူတွေ အတွက်ပဲ သင့်တော်တာမို့) ဘယ်တော့မှ အသုံးမပြုမိနိုင်ကြပါစေလို့…။
”မိဘက သားသမီးအပေါ်မှာ ထားတဲ့မေတ္တာ လောက် ကြီးမြတ်တာ လောကမှာမရှိနိုင်ပါဘူး” ဆိုတဲ့စကားကိုသဘောတူလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိဘဆိုတာ လည်းလူသားပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတို့မည်သည် ဖောက်ပြန်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိဘဆိုတာလည်း ရံဖန်ရံခါတော့ ဖောက်ပြန်တတ်ပါတယ်။
”ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်း” ဆိုတဲ့ စကားပုံကို မိဘမေတ္တာကိုစော်ကားသလိုဖြစ်တယ်လို့ သဘောမထားပဲ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ လူသားတို့ရဲ့ သဘောကို အမြဲသတိရှိနေအောင် သတိပေးတဲ့ စကားပုံလို့ မှတ်ယူရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
တခါတုန်းက အဖေကပြောဖူးတယ် ကိုယ်အချစ်ခံဖူးမှ သူတပါးကို ပြန်ချစ်တတ်တယ်တဲ့။ ချစ်တတ်တဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့မိဘနဲ့ ကြီးပြင်းလာသူကသာ ကိုယ့်သားသမီးအပေါ် တဖန်ပြန်ကြင်နာတတ်တယ်တဲ့။ ရက်စက်တဲ့မိဘနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့သူတွေဟာ ရက်စက်တဲ့ အပြုအမူကို မိမိစိတ်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ပဲ မနှစ်မြို့ပါစေ ကိုယ့်သားသမီး အလှည့်မှာလည်း အလားတူပဲြ ပန်လည်ပြုမူတတ်တယ်တဲ့။ တချို့ လူတွေ တွေ့ဖူးတယ် ကလေးကို အရွယ်နဲ့မမျှ ရိုက်နှက်နေတာတွေ။ ကျွန်မ အယူအဆပေါ့ မှန်ချင်မှလည်းမှန်မယ် မိဘတိုင်းလည်း မိဘမပီသကြပါဘူး။ မိမိအတွက်သာ သိပြီး သားသမီးအတွက် ထည့်မတွက်တဲ့ မိဘတွေ တွေ့ဖူးတယ် မွေးထားလို့သာ မိဘလို့ ခေါ်ရပေမဲ့ အတော်လူမဆန်တဲ့ လူတွေပါ။
မမှီရေ… ဟိုသီချင်းထဲကလိုပေ့ါ… လှလို့ချစ်တာ မဟုတ်… ချစ်လို့ လှတာပါတဲ့လေ… ။ ချစ်တဲ့အခါ အကောင်းမြင်တဲ့ မျက်စိနဲ့ ကြည့်တော့ အမြဲတမ်းလှနေတာပါ … ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်ရင်ကောင်းတာပဲလေ…။ အပစ်လို့မမြင်တတ်ကြဘူး….။ အရာရာမှာ အပြစ်မမြင်ပဲ ချစ်နိုင်ပါစေ……။
မိဘတိုင်းက ရုပ်ဆိုးတဲ့သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုးတဲ့သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်ကြီးသွားတဲ့သားသမီးတောင် သူ့အမြင်မှာ ကလေးလေးပဲ မြင်နေတာဟာ မိဘတွေရဲ အနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာတရားကြောင့်ဆိုရင် ပိုမှန်မယ်ထင်ပါတယ်။
အလှဆိုတာကို မြင်တာဟာ… အနေနီးတာ..မြင်ဖန်များတာနဲ့လည်း ဆိုင်မယ်ထင်တယ်..။
အဓိက ကတော့ ..စိတ်ပေါ့လေ…
ကျောက်ပေါက်မာတွေနဲ့ယောက်ျားကို ..လှတဲ့မိန်းမက ယူတော့…ငါ့ယေက်ျား ရုပ်ဆိုးလိုက်တာပေါ့..။
အဲဒီလိုနဲ့.. နှစ်တွေကြာတော့ ..ယောက်ျားကလည်း မိန်းမအပေါ် ချစ်ခင်ကြင်နာတာနဲ့.. သာယာတဲ့…အိမ်ထောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့..။
… ကျောက်ပေါက်မာတွေ …တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း…
ငါ့ယောက်ျားက..ကျောက်ပေါက်မာလေးတွေနဲ့မှ… ခန့်ချောတာ..လို့တွေးသတဲ့..။ အဲ..တွေးတွေးပြီး ပိုချစ်ချစ်လာသတဲ့…။
အဲဒါကို ပြန်ပြောတာ… တကယ်ကြားဖူးတယ်..။
ရွာထဲက အပျိုကြီးတွေ.. ကျောက်ပေါက်မာနဲ့ယောက်ျားရှာယူကြည့်..။
သဂျီး ကတော် အတွေးကို သဂျီးက ဒီမှာ လာရေးပြတာလား။
အဲဒီ မိန်းမ ပြောတဲ့ ကျောက်ပေါက်မာတွေနဲ့ယောက်ျားက သဂျီးလားဟင်…… :-)
ကျိုးမြတ်ပီတိ ရင်ဝယ်ငြိ၏။။။ တဲ့… သို့ဂလို… ဖတ်ဖူးတယ်… (၁၀)တန်း ဖတ်စာထဲမှာ… အတိအကျတော့ မှတ်မိဘူး..
ဒါကြောင့်… အလှဆိုတာ…. မြင်မြင်သမျှ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်… ဖြူစင်မှု ရှိခဲ့ရင်… သူယုတ်မာတရားတွေသာ မပါခဲ့ရင်… … သေချာပါတယ်.. အလှဆိုတာ..ခံစားသူရဲ့ စိတ်နဲ့သာ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တာပါ…. သူကလှတယ်ထင်ရင်…. လှနေမှာပါပဲ….
ဟုတ်မှာပါ တကယ်ပါအဲဒီစကားက အမှန်ပါပဲ။
ဆယ်တန်းစာဘယ်လောက်ကြေတယ်မသိဘူး … ကြားကို မကြားဖူးတာ သမီးက
ဟားဟား ကိုခိုင်ပြောတာ ရှမ်းကြိုက်လို့နွားချော ဆိုတဲ့ စကားပုံလိုဖြစ်နေပြီ။ ကောင်းပါ့။
ချစ်ရင်မမြင်တာတော့ အမှန်ပဲ။ rose လဲလေ မမ ပြောသလို ကိုယ်တူမလေး ကို ကိုယ်ချစ်တာ သူ့ကို အလှဆုံးပဲမြင်တယ်။ ချစ်စရာ အကောင်းဆုံးပဲမြင်မိနေတယ်။